हेर्नुहोस आजको राशिफल : बिहीबार कुन-कुन राशिको लागि फलदायी ? – Khabarhouse
Khabar house | २३ बैशाख २०७८, बिहीबार ०१:२० | Comments
काठमाडौं : विस. २०७८ साल वैशाख २३ गते बिहीबार । इस्वी सन् २०२१ मार्च ०६ तारिख । नेपाल संवत् ११४१। राक्षस संवत्सर। उत्तरायण । वसन्त ऋतु । श्रीशाके १९४२ । वैशाख कृष्ण पक्ष । तिथि– दशमी, ३० घडी १० पला, बेलुकी ०५ बजेर २७ मिनेट उप्रान्त एकादशी । नक्षत्र–शतभिषा, २१ घडी २२ पला, दिउँसो ०१ बजेर ५६ मिनेट उप्रान्त पूर्वाभाद्रपदा । काठमाडौँमा सूर्याेदय बिहान ०५ बजेर २२ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ३९ मिनेट । दिनमान ३३ घडी ११ पला ।
मेष : विभिन्न भौतिक तथा विलासी सामानहरू जुट्नेछन् भने दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसायबाट मनग्य आम्दानी हुनेछ । माया प्रे’ममा नजिक हुने समय रहेको छ । तर पनि बाहिरी वातावरण तथा मौसमको ख्याल गर्नुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।
बृष : सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाइ वा लेखहरू जनमानसमा लैजान सकिनेछ। बुवा सरहका मानिसबाट तपाईंको काममा सहयोग हुनाले अन्य काम गर्न सहज हुनेछ। सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईंको वर्चस्व कायम रहनेछ भने माया प्रे’ममा एक अर्कालाई विश्वास गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ ।
मिथुन : आफ्नो रीतिरिवाज जोगाउने काममा समय खर्च हुनेछ । सामाजिक काम गरी समाजमा नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जाने तथा आफन्तहरूलाई खुसी पार्न सकिनेछ भने प्रविधिको प्रयोगमार्फत अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । प्रे’म प्रसङ्गमा रमाउन चाहनेहरूका लागि दिन उत्तम रहेको छ ।
कर्कट : परिवार तथा आफन्तजनसँग मनमुटाव बढ्नेछ भने पति प’त्नी तथा माया प्रे’ममा अविश्वास सिर्जना हुनेछ । सवारी साधन तथा यात्रा गर्दा विषेश ध्यान दिनुहोला, दुर्घ’टना तथा अ’प्रिय घ’टना घट्न सक्छ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन निकै नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी स’मस्याले सताउनेछ भने आफन्त तथा विश्वास गरेकैहरूबाट धोका हुनेछ ।
सिंह : आफ्नो क्षमता प्रयोग गरी अरूको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ भने मानसम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ । मानव निर्मित भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाइने तथा वि’लाशी जीवन व्यातित गरी रमाउने समय रहेको छ । जीवन साथीसँग रमाइलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
कन्या : न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईंकै पक्षमा हुनेछन् भने सत्रुलाई परास्त गर्ने उपाए फुर्नेछ । पुराना रोग तथा ऋ’णबाट मुक्त भई नयाँ काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने छ । अध्ययनमा प्रतिस्पर्धीहरूलार्ई साइड लगाउँदै एक दुई कदम अगाडि बढ्न सकिनेछ । नयाँ ठाउँबाट प्रे’म प्रस्ताव आउने तथा प्रे’मका कोपिलाहरू पक्रिएर जानेछन् ।
तुला : पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजा हात लाग्ने योग छ भने बौद्धिक, साहित्यिक तथा सिर्जनात्मक क्षेत्रमा समय लगानी गरी आम्दानी बढाउन सकिनेछ। आ’कस्मिक धन तथा सम्पत्ति हातलागी हुने योग छ । सेयर बजारमा गरिएको लगानी फस्टाएर जानेछ । प्रे’म प्रसङ्गमा रमाउने समय छ भने पति प’त्नी बीच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ ।
बृश्चिक : सवारी साधन तथा घरजग्गामा गरिएको लगानी फस्टाएर जानेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट भने सन्तोषजनक आम्दानी हुने छ । राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको समर्थन भन्दा आलोचना बढी सुन्नु पर्नेछ। आमासँग मन मु’टाव बढ्नेछ । विद्यामा बढी नै समय लगानी नगरे अरूभन्दा पछि परिनेछ भने छाती स’म्बन्धी सामान्य स’मस्याले सताउनेछ ।
धनु : नोकरीमा सम्मान तथा राजनीतिमा लाग्नेहरूले विशेष पद पाउने समय छ । छोटो तथा अर्थपूर्ण उपलब्धिमूलक यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने गन्तव्य पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सकिने छ । न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईंकै पक्षमा आउनेछन् भने पराक्रम बढेर जाने हुनाले साहसिलो काम गर्न जोस जाँगर बढेर आउनेछ । अध्ययनमा सुधार भएर जाने हुनाले साथीहरूलाई किनारा लगाउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ ।
मकर : माया प्रे’म गर्नेहरूले आफ्नो मन परेको मान्छेसँग बसेर समय व्यातित गर्दा खुसी भएको महसुस गर्नेछन् । स्वास्थ्य आफ्नै काबुमा रहने हुनाले नयाँ नयाँ काम गर्ने जोस जाँगर बढेर आउनेछ। अध्ययन अध्यापनमा अरूलाई पछिपार्दै पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र जित्न सकिनेछ । मीठो बोलेर अरूको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ ।
कुम्भ : कामगरी अरूलाई प्रभावित पार्न सकिनेछ भने समाजमा मानसम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ । अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने अरूलाई पछि पार्दै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । राजनीति गर्नेहरूले राज्यबाट पद पाउने समय रहेको छ । विलाशी वस्तुको प्रयोग मार्फत अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
मीन : परिवार तथा आफन्तसँग भेटघाटका क्रममा खानपानमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्य स’म्बन्धी सामान्य स’मस्या आउन सक्छ । पढाइलेखाइ तपाईं आफ्नै कारणले बिग्रन सक्छ, ध्यान दिनु होला । विदेश यात्राको गतिलो सम्भावना छ भने विदेशी सामानको व्यापार फस्टाएर जानेछ । बन्द व्यापारमा प्रशस्त समय लगानी गरे पनि प्रतिफल न्यून आउने हुनाले मन दुःखी हुनेछ । गलत साथीको सङ्गतमा लाग्नाले नराम्रो काममा फ’स्न सकिने योग छ, ध्यान दिनुहोला । तपाईंको दिन शुभ रहोस् युवा ज्योतिषी डीपी भण्डारी, ज्योतिष परामर्श सेवा केन्द्र
हेर्नुहोस आजको राशिफल : शनिबार कुन-कुन राशिका शुभ ?
आजको राशिफल : शुक्रवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य !